An-tsary ny dian’i Neny ny faran’ny herinandro teo – MyDago.com aime Madagascar
An-tsary ny dian’i Neny ny faran’ny herinandro teo
Herinandro mahamay !
6 pensées sur “An-tsary ny dian’i Neny ny faran’ny herinandro teo”
…..hatr@’olona any anaty Taxi-be tompoko anao ô no manome tanana an’i Neny!!!!!
Tena mbola tsy nahita ohatra ity aho ray olona!!!Tonga ho azy @’izay ilay TSIKY!!!
Misaotra an’ilay Andriananahary fa lehibe izy .
MIFOAZA RY MALAGASY FA TONGA ILAY ORA a!!!!!
MAHEREZA !MANDRAISA ANJARA @’IZAY TANDRIFINY AVY HO HANAVOTANA
NY FIRENENA MIARAKA @ NENY RAY OLONA a!!!fotoanany izao e!!!NDAO eeeee
Inona no mba kabary hataon’ilay iraikalahy io eo hono??
Tsy inareo ireo irery no mitomany fa na izaho manoratra izao aza , tena feno ilay fo ry zareo fa
aoka kosa mba ho ranomasom-pifaliana sy FANANTENANA an!!!Homba antsika Andriamantra!
10 juin 2013 à 5 h 18 min
Neny = ForceTranquille
YOU are overwhelming (lovelike feeling)
in my memory comes up
all crual blood-chasing of TIKO’s employees
stealing burning this big factory T I K O HIGH QUALITY made in Madagascar by GASY
which propels the MALAGASY ECONOMY
Jalousy when you cach those TGV Andry Rajoelina & his anti-economic followers,
typically and speedy french tramway, mainly financed up to now by same developped country FRANCE
One day, in memory of our lost ones,
a monument has to be arisen
THERE in Antsirabe
similar case to what happened back in 1947 in Moramanga
for the battle engaged
longlasting FIGHT AGAINST all forms of COLONIAL JOUG
May God bless you, lady Mrs Lalao Ravalomanana
tsy malagasy ireny e, hodiantsy hita.
Tony ho mailto isika fa hataon’i Rajoelina izay tsy ahantanteraka ny fifidianana filoham-pirenena @ 24 jolay ary io datin’ny 23 aogositra io,ka dia tsy maintsy hihemotra satria tsy hanaiky an’io ny fianakaviambe iraisam-pirenena, hiakatra ny valala, ary manala bac ny mpianatra. Tsy hihetsika kosa ilay fifidianana solo-bavambahoaka @ septambra dia tanteraka ny fanirian’i Rajoelina.. Avy eo tsy misy fifidianana azo atao intsony satria,ho avy ny orana. Dia tsy hisy fifidianana filoham-pirenena @ ity taona ity.. Raha mijoroa anefa ny CES sy ny CENI-T ka hampian’ny vahoaka dia i Lalao Ravalomanana no,handresy ka,ny hanakanana an’izany noataon’ny frantsay sy ny Fozaorana.
Ny tolona tsy mora e! izany no ilaina antsika mianakavy hifanome tanana hamerina indray ilay tany tan-dalana ary vavaka no tena zava-dehibe , manome hery io fa tsy tokony atao ambaninjavatra , rehefa mivavaka dia manana finoana ary omen’Andriamanitra hery sy saina ary fahendrena, ka aza misy kivy izany
Précédent Article précédent : Rtoa LALAO RAVALOMANANA TAO RAFATSIHO : FAHOMBIAZANA TANTERAKA
Suivant Article suivant : LALAO RAVALOMANANA : Nanome torohevitra ny mpino ny FJKM Ambatofotsikely Fahamarinana